မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XII
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XII
FaceBook မှာ ကိုယ့်ထင်ကြေးနဲ့ကိုယ်ရေးကြတယ်၊မသိဘဲနဲ့ပြောကြတယ်၊
မလေ့လာဘဲနဲ့ပြောကြတယ်၊ လေ့လာဘို့ပစ္စည်းတန်ဆာပလာ အခွင့်
အလမ်း လဲ ချွတ်ယွင်းချို့တဲ့တယ်၊
ဒီကြားမှာ အနောက်ဩဇာခံတွေကလဲ ဖွပေး ကြတယ်၊
ဒါကြောင့်မို့လို့ အောက်ပါအကြောင်းကိစ္စတရပ်ကို တမျိုးတမည် ထင်မြင်ယူဆကာ
သူများဆီမှာလာပြီး မစင်စွန့်တာ စသဖြင့် ပြောကြတယ်၊
ဒါတွေ က မမှန် ပါ၊ ဖေ့ဘို့ ကွန်မန့်အ ချို့ကို ပြပြီးနောက် ပိုင်းမှာ
(ပညာရှိကြောင်ပါးတွေက သိရက်နဲ့” ဘေတီး “ပေးကြတာလဲပါတယ်)
တရုပ် နိုင်ငံ မှာ လဲ မြစ်ကြီး တွေ ရှိ တယ်
ဘာ့ကြောင့် တရုပ် နိုင်ငံ က မြစ် တွေ ကို ရေကာတာ မဆောက် လုပ် ရ သလဲ ?????…
ဘာလို့ သူများနိုင်ငံထဲက ဟာမှယူချင်နေရတာလဲ
ဘယ်လောက်ပြောပြော အရှက်ကို မရှိဘူး
သူတိုတရုတ်တွေဆောက်ထားတဲ့ဆည်တွေ အဆင်ပြေလားတိုင်ပြည် မေးကြည်ပါလား
သူတိုဆီမှာ မြစ်တွေ ကျန်သေးတာဘဲ့ဘာလိုသူတိုဆီမလုပ်တာလည်း
လွယ်လွယ်တွေးကြည့်ပါလား အကျိုးတကယါရှိရင် သူတပါးနိုင်ငံလားဆောက်နေပမလား
မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်.သံလွင်မြစ်ပေါ် ရေကာတာ ဆောက်ရာမှာ တရုတ် နိုင်ငံ ထဲမှာမဆောက်ဘဲ
ဘာကြောင့် မြနိမာ နိုင်ငံ ပေါ်ရောက်မှ ဆောက်ရတာလဲ.
မယုံပါဘူး ။ တရုတ်က သူဆီမှာပေါလိုက်တဲ့မြစ်တွေ ဘာလို့ သူတို့နိုင်ငံမှာ ရေအားလျပ်စစ်မထုတ်နိုင်တာလည်းဗျာ။
တခု တော့မေးကြည့်ချင်တယ် တရုတ်ကသူတို့နိူင်ငံ မြန်မာနိုင်ငံထက်
ထဲမှာ မြစ် ချောင်း ရေတံခွန် ဘာတခုမှမရှိဘူးလား
မြစ်ဆုံကို တရုတ်ကဘာကြောင့်လိုချင်သလဲ စဉ်းစားပါ သိပ်အန္တရာယ်ကြီးတယ်နော်
တည်ဆောက်ပြီးတဲ့တနေ ့ကြရင်တို ့နိုင်ငံကိုဒီကောင်တွေဒီရေကာတာနဲ့ပဲခြိမ်းခြောက်မှာကို
စိုးရိမ်မိပါတယ်တည်ဆောက်ပြီးလို ့ဒီရေကာတာတခုခုဖြစ်ရင်တို ့လူတွေပဲထိခိုက်နစ်နာမှာဒါကြောင် ့
တရုတ်မှာ နောင်နှစ်တွေ ကြာလာရင် ရေအရင်းမြစ်မရှိတော့ပါဘူး ရေကာတာကြီးတည်ဆောက်ပြီးရင်
ရေတင်ပို့မယ် လျှပ်စစ်တွေယူမယ် ……
တရုပ် အဖွဲ့အစည်းတွေ လုပ်ချင်လို့ စ ကမ်းလှမ်းတာမဟုတ်ပါ၊
UK ယူကေ သံအမတ်ဟောင်းVicky Bowman ရေးတဲ့စာအုပ်က ကောက်နှုက်ချက်၊
၁၉၅၂ ခုနှစ် မှာမြန်မာအစိုးရက ဥရောပ နိုင်ငံတွေ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တရုပ်နိုင်ငံ
တို့ကို မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ်ဘို့ လိုက်ဆွယ်တာ အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်
၂၀၀၁ ခုနှစ် မှာ တရုပ်အစိုးရ ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်သွယ်ပြန်တယ်၊
ဒေသခံ နိုင်ငံရေး မ တည်ငြိမ်မှုကြောင့် တရုပ်အဖွဲ့အစည်းတွေက နောက်ဆံတင်း
အာမခံချက်တွေကို အခါခါပေးခဲ့တယ်၊ အထူးသဖြင့်နောင်သမတဖြစ်လာတဲ့
ဦးသိန်းစိန်က တရုပ်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းဌာနတွေလုပ်ငန်းတွေကို အကြိမ်ကြိမ်
အသွင်ဆောင် ဗန်းပြနေတာက မမှန်ပါ၊
၂၀၀၆ မှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဟောင်း (ဒုမှူးချုပ်ကြီး) စိုးဝင်းကမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရင်းနှီးဘို့ စီပီအိုင်ကိုဘိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်၊
မြန်မာဝန်ကြီးဌာန တစ်ဆယ်ကျော် က ပါဝင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်၊
ဖွံ့ဖြိုးကောင်းစားဘို့ နိုင်ငံတကာကို သွားသွားပြီးအရင်းအနှီးမြှုပ်နှံဘို့ဘိတ်တယ်၊
အာရှအလယ်ပိုင်းIraq အီရပ်နဲ့Afghanistan အက်ဂန်နစ်တန်မှာ တပြိုင်နက် ၁၂ နှစ် ကျော်
စစ်ပွဲတို့မှာ၎င်း၊ Libyaလစ်ဗီရား နဲ့Syria စီးရီးယားမှာ၎င်း၊ ဗုံလိုက်ကြဲ စစ်စရိတ် ကုန်လို့လဲ
နိုင်ငံခြားထောက်ပံ့ကြေးတွေသိပ် မ ပေးနိုင်တော့ပါ၊
တရုပ်၊ ဂျပန် တို့ဆီက billion$ ထောင်သောင်းနဲ့ချီပြီး ချေးယူရတုန်းဘဲ၊
ဒီချိုင်းနားပြည်ထုတ် သတင်းထဲပါတာလေးကို.. မှတ်တမ်းထား တင်ထားချင်ပါတယ်..။
အဓိပ္ပါယ်တော့.. ဖဘမှာတယောက်ဘာသာပြန်ထားသမို့.. မှန်းသမ်းသိ..။
တလုပ်သဘုံကြေးမုံဂ ျီးများ လှူ လှ ျာလှုပ်လို့ ၇၈၆မာမူသဂ ျီးရယ်…
ခုမြစ်ဆုံရဲ့ အခြေအနေကဘယ်လိုများဖြစ်နေပါလိမ့် ရင်လေးတယ်..
မြစ်ရေစီးကြောင်း ပင်လယ်ဝအထိ ဘယ်လိုများသက်ရောက်မူ့
မြစ်လမ်းကြောင်းကို ဆည်ရှိနေသ၍ ဘယ်ဘက်က
စာချုပ်ကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ပြင်ချုပ်ပြီး..စာချုပ်ထဲ.. အဲဒီဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတလျှောက် ရေအရင်းအမြစ်စီမံရေးနဲ့..
တတိယပါတီ(ဥပမာ ..ဆွဇ်ဇလန်နိုင်ငံ) က.. ပညာရှင်တွေက.. ဆန်းစစ်ထိန်းကြောင်းမှုအောက်မှာ.. ဆက်လုပ်ဖို့ .. တိုက်တွန်းနေတာပါ..။
နောက်ကိုအသာကလေးတော့ မဆုတ် ေစေချင်။
အောက်ကလည်းနေသေး.. ကြောက်ပြီလားလို့အော်တာဖြစ်နေပြီ ကိုရင်ရယ်..။
ပီကင်းကို ဝါးရင်းတုတ်နဲ့များ တက်သိမ်းဖို့ကြံနေ(ပြန်)ပလားတော့မသိ..။
မြင်မာ လေ သူကြီးရဲ့ မြင်မာ
စက္ကူ စက်ရုံလာတည်သွားပြီ သူကြီးရဲ့။
ဟိုအရင်နှစ်တွေကတော့ အမေစုက မြစ်ဆုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာချုပ်ကို သူလုံးဝမမြင်ရသေးဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်။ အခုကော မြင်ပြီးပြီလား။ ကော်မရှင် ဖွဲ့တယ် ဆိုကတည်းက လုပ်တော့မယ်ပေါ့။ တိုင်းပြည်ကို ဘာမှ မချပြရသေးဘူးနော်။
တရုတ်ကတော့ လွယ်လွယ် လျှော့ပေးမယ် မထင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ သူတို့ဟာက ငလျင်ကြီးဒဏ် ခံ မှ မဟုတ်တာ။ ဆည်မြောင်းဦးစီးက စဉ်းစားထားတဲ့ ၈ဘီလျံ တန်ဆိုတာကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ တည်ဆောက်ကာလ ၈ နှစ်မှ ၁ဝ နှစ်ထိ ကြာမယ်ဆိုတော့ ဒီကြားထဲ ဘယ်လိုဆက်စခန်း သွားရမလဲ မသိ။
လှ ျပ်စစ်ရကြောင်းထဲမှာလဲရေအားကဘေးကင်းပြီးစေ ျးအသက်သာဆုံးပါ
တဦုးတဖွဲ့အတွက်မ ျားမ ျားမဖြစ်ဖို့အဓိကကြည့်ရပါမယ်